Mogadishu Journal » 2018 » October » 11
Mjournal :-C/llaahi Sheekh Xasan oo ah Wasiirka Dastuurka ee Maamulka Koofur Galbeed ayaa loo magacaabay Afhayeenka Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada. Qoraal magacaabis ah oo ka soo baxay Guddoomiyaha Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada ahna Madaxweynaha Puntland C/weli...
Shir ay golaha wasiirada XFS ay maanta Muqdisho ku yeesheen ayaa looga dooday dardar-gelinta barnaamijka is-xilqaan oo lagu dhisayo xarumaha danta guud iyo wadooyinka si loo soo nooleeyo bilicda dalka iyo haybadda qarannimo. Wasiiru dawlaha xafiiska ra’iisul wasaaraha...
Mjournal :-Wararka ka imaanaya magaalada Mandhera ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa sheegaya in labo Macalin Kenyan ah lagu dilay deegaanka Arabiya oo u dhow xuduudka Soomaaliya. Dabley hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar loo adeegsaday waxyaabaha qarxa ku weeraray guri...
War-Murtiyeed laga soo saaray Shirka Madasha Guddiyada Dastuurka
Mjournal :-War-Murtiyeed ayaa laga soo saaray Shirka Madasha Guddiyada Dastuurka ee Heer Federaal iyo Heer Dawladaha Xubnaha ka ah Dawladda Federaalka kaasoo maalmihii lasoo dhaafay ka socday Magaalada Garowe ee Caasimadda Puntland. Madasha ayaa dowladda dhexe iyo dowlad...
Kulan looga hadlayay xoojinta ammaanka oo lagu qabtay Muqdisho
Mjournal :-Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya, Xasan Cali Maxamed (Amar-dambe) ayaa shir guddoomiyay kulan looga hadlayay ammaanka dalka iyo sidii loo dar-dargelin lahaa howl-gallada ay Ciidamada xoogga wadaan kaas oo ka dhacay Magaalada Muqdisho. Kulankan uu guddoominayay...
Weerar khasaare dhaliyay oo lagu qaaday Guri ku yaal Baydhabo
Mjournal :-Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay ayaa sheegaya in weerar khasaare dhaliyay lagu qaaday xalay fiidkii guriga Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Baay. Kooxo hubeysan ayaa bam gacmeed ku weeraray guriga Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Baay,...
Imaaraadka Carabta oo ku xadgudubtay Cunaqabateynta Soomaaliya
Mjournal :-Telefishinka Al-Jazeera ayaa heshay qeyb ka mid ah warbixinta Guddiga Qaramada Midoobey u qaabilsan la socodka Cunaqabateynta saaran Soomaaliya iyo Eritrea, taasoo muujineysa in Imaaraadka Carabta uu ku xadgudubtay cunaqabateynta Soomaaliya. Warbixinta Guddiga Qaramada...